Shabaab oo madafiic ku garacay xarunta Xalane & QM oo Somalia ugu baaqday Baritaan! ⋆ Soomaaliweyn | Wararka Iyo Warbixinada Dalka | Somalia's Latest News
Home Wararka Shabaab oo madafiic ku garacay xarunta Xalane & QM oo Somalia...
Shabaab oo madafiic ku garacay xarunta Xalane & QM oo Somalia ugu baaqday Baritaan!
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey Antonio Guterres ayaa si kulul uga hadlay weerar madaafiic loo adeegsaday oo ay Al Shabaab shalay ku qaadeen xarunta Qaramada Midoobay ku leedahay magaalada Muqdisho.
Labo kamid ah Shaqaalaha Qaramada Midoobay iyo qof qandaraasle ah ayaa ku dhaawacmay madaafiicda shalay lagu garaacay Xarunta Xalane ee ku soohinta ah Garoonka duyuuradaha ee Aadan Cadde, waxaana qeyb kamid ah xaruntaasi dagan Qaramada Midoobay.
Antonio Guterres ayaa weerarka xaruntooda Muqdisho lagu qaaday ku tilmaamay mid xadgudub ku ah sharciga caalamiga ah ee bani’aadanimada .
Xoghayaha Guud ee QM Antonio Guterres ayaa dowlada federaalka Soomaaliya uga baaqay in si deg deg ah loo baaro weerarkaasi lagu qaaday xarunta Xalane cadaaladana lagu horkeynaa dadkii ka dambeeyay .
Waxa uu sheegay Xoghayuhu in weerarkan uusan waxbo u dhimi doonin howlaha Qaramada Midoobay ka wado Soomaaliya,waxa uuna balan qaaday in ay sii wadi doonaan taageerada dowlada iyo shacabka Soomaaliyeed.
Kooxda Al Shabaab ayaa si deg deg sheegatay masuuliyada madaafiicda shalay lagu weeraray xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho, waxa ayna Shabaab sheegeen in 7-madfac gudaha ugu dhaceen xarunta Xalane khasaarana uu kasoo gaaray qaar ka mid ah Shaqaalaha QM ee Somaliya.
Previous articleQarax miino ah oo ka dhacay Muqdisho
Next articleCiidan cusub oo loo diyaarinayo sugidda amniga Caasimadda